အနှိပ်ရေချိုးခြင်းကိရိယာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | တရုတ်အနှိပ်ရေချိုးစက်
စိတ်ကြိုက်အကြီးစား Dactactab ...
မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေးအသုံးအဆောင်များ ... Brick ...
ခွေး Poop အိတ်စွပ်
2. ကြောင်ဆံပင်ဖယ်ရှားပေးသောဖြီးသည်ဆံပင်ကိုစုပ်ယူရန် electrostatic နိယာမကို အသုံးပြု၍ အလွန်သေးငယ်သောဒီဇိုင်းဖြင့်ရော်ဘာပျော့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
4. ဖြီးသည်ခွေးနှင့်ကြောင်အရွယ်အစားအားလုံးအတွက်သင့်တော်သည်။ ၎င်းသည်အဆင်ပြေသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထောက်ပံ့ရေးဖြစ်ပြီးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးသင့်အခန်းကိုသန့်ရှင်းစွာ ထား၍ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကိုကျန်းမာစေပါသည်။
Dog Bathage Massage Brush သည်ရော်ဘာတံသင်ဖြင့်ပျော့ပျောင်းသောကြောင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်အနှိပ်ခံနေစဉ်သို့မဟုတ်ရေချိုးနေစဉ်၎င်းသည်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကုတ်အင်္ကျီမှချောင်ကျသောသားမွေးများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့်ဆံပင်အမျိုးအစားများရှိခွေးများနှင့်ကြောင်များတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
Dog Shampoo Grooming Brush
(၃) စက်ဝိုင်းသေးငယ်တဲ့သိုလှောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုရေချိုးနေစဉ်မှာခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ဆပ်ပြာကိုသုံးဖို့မလိုပါဘူး။ ၎င်းဖြီးကိုရေချိုးရန်နှင့်ခွေးများအတွက်အနှိပ်ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
4. သင်၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကိုအနည်းငယ်ပွတ်တိုက်ခြင်း၊ ဤခွေးခေါင်းလျှော်ရည်ဖြီးဖြီးသည်ခွေးအားအခြားဘုံဖြီးများထက်သန့်ရှင်းစေရန်အမြှုပ်များပြုလုပ်နိုင်သည်။
Dog Dog Shush Brush
၁။ ဤ ၀ န်ထမ်းလေးများသည်ခွေးရေချိုးသည့်ရေချိုးတံမှုတ်သည်ရှုပ်ထွေးသောဆံပင်များနှင့်အသားများကိုအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောရာဘာစိမ်းများသည်အမှိုက်၊ ဖုန်နှင့်ဆံပင်ချွတ်ရန်အတွက်သံလိုက်အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။
၂။ ခွေးရေချိုးတဲ့ဒီအံသွားမှာအဝိုင်းသွားရှိတယ်။ သူကခွေးအရေပြားကိုမထိခိုက်ဘူး။
၃။ Dog Bath Shower Brush ကိုသင်၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုအနှိပ်ခံရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
4. ဆန်းသစ်သောချောခြင်းမရှိသောဆုပ်ကိုင်ထားသည့်အရာ၊ သင်ရေချိုးသည့်အချိန်၌ပင်သင်၏ခွေးကိုအနှိပ်ခံသည့်အခါဆုပ်ကိုင်မှုကိုခိုင်မာစေသည်။
၁။ ဒီခွေးရေချိုးဆေးရေဆေးသည်ရေဖြန်းခြင်းနှင့်ရေဖြန်းစက်ကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်ရေချိုးနိုင်ရုံသာမကအနှိပ်လည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်ခွေးအား spa mini အတွေ့အကြုံပေးခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
2.Professional ခွေးရေချိုးရေချိုးမှုတ်ဆေး, အရွယ်အစားနှင့်အမျိုးအစားများအားလုံးခွေးကိုဆေးကြောဖို့ဒီဇိုင်းထူးခြားတဲ့ပုံသဏ္shapeာန်။
3. ဖြုတ်တပ်နိုင်သော faucet adaptor များ၊ အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်ပြီးဖယ်ရှားပါ။
၁။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ခြင်းရေချိုးခြင်းနှင့်အနှိပ်ခံခြင်းတို့ကိုစိုစွတ်သော (သို့) ခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်ကိုသန့်ရှင်းရေးအတွက်ရေချိုးဆေးတံအဖြစ်သာမကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုအတွက်အနှိပ်ခံကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်သော TPE ပစ္စည်းများ 2. ပျော့ပျောင်းသော၊ မြင့်မားသော elasticity နှင့်အဆိပ်အတောက်မကင်းသောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်သောဒီဇိုင်း၊ ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူပြီးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။